Otú nyefee Music si Flash Drive ka iTunes
Dị ka flash draịva aghọ ewu ewu maka nkekọrịta na-enyefe faịlụ, otu nwere ike ịhụ onwe ha na kacha ekpo ọkụ ugbu tracks na ha mkpa nyefee iTunes ma ọ bụghị maara otú e si. iTunes bụ oké ụzọ iji chekwaa gị media faịlụ na ya ikike idozi gị albums na nka na a ọzọ n'usoro n'ụzọ. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị chọrọ nyefee music ha flash mbanye na iTunes.
N'ezie, iTunes anaghị akwado niile music formats. Formats na iTunes-akwado na-; MP3, AAC, M4A, WAV, M4R, M4B, AIFF na AIF, nke ị nwere ike ozugbo idetuo ha ka ha iTunes.
Ya mere ihu ọma, songs na a flash mbanye nwere ike kewara abụọ na ụdị: iTunes dakọtara na ndị iTunes kedi n'anya. iTunes dakọtara songs ike-atụkwasịkwara iTunes Library ozugbo. iTunes kedi music-apụghị dị ka iTunes mgbe niile. Iru ihe mgbaru ọsọ gị, ị kwesịrị ị na-agbalị a workaround. Na-esonụ, 2 ngwọta na-nyere gị nyefee niile music (niile formats) si a flash mbanye na iTunes Library hassle kpam kpam.
Ngwọta 1. Nyefee iTunes akwado Songs si a Flash Drive ka iTunes Library
Ngwọta 2. Nyefee iTunes niile Songs (dakọtara / kedi) si Flash Drive ka iTunes Library
Mgbe gị na songs na MP3, AAC, M4A, WAV, AIF, AIFF, M4R, na M4B, ị nwere ike ozugbo tinye ha gị iTunes Library.
Jikọọ gị flash mbanye gị na kọmputa
Fanye gị flash ụgbọala n'ime a USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na kọmputa gị na dakọtara music ị chọrọ nyefee.
Ugboro abụọ pịa iTunes icon ẹkedori ya, wee họrọ "Mmasị" nke i nwere ike ịhụ na 'Dezie "menu.
Gaa" Advanced Mmasị "site na ịpị" Advanced "abụọ nhọrọ na mkpa ka-enyocha a nhọrọ:
1) Buru iTunes Media nchekwa haziri
2) Copy faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na n'ọbá akwụkwọ.
Nyefee music si flash mbanye na iTunes.
Na iTunes menu, họrọ "File", mgbe ahụ, "Tinye faịlụ ka ọbá akwụkwọ" ma ọ bụ "Tinye nchekwa ọbá akwụkwọ" nke na-adabere ihe ị chọrọ.
Chọgharịa gị na kọmputa na-ahụ gị na flash mbanye, ọ kwesịrị anya n'okpuru "My Computer". Họrọ songs ma ọ bụ na nchekwa na music mbubata ya ndị iTunes Library si flash mbanye.
Alternatively, i nwere ike imeghe gị flash mbanye, họrọ songs ma ọ bụ nchekwa na music ị chọrọ mbubata, detuo ya, na iTunes, mgbe na music window, họrọ "Dezie" mgbe ahụ "mado".
Usoro ekwesịghị ewe oge ezie na ọ ga-adabere na ọnụ ọgụgụ nke songs na ị na-importing, ihe, na ogologo ọ pụrụ ime.
E nwere ụzọ ọzọ na-Nyefee iTunes akwado Songs si a Flash Drive ka iTunes Library mfe na software wondershare TunesGo.
N'ụzọ dị mwute, ma ọ bụrụ na songs na gị flash mbanye-adịghị na n'elu kwuru banyere iTunes akwado formats, ị kwesịrị ị na-eji nke a ọkachamara ngwá ọrụ "TunesGo" nyefee ha ka ha na-iTunes Library. Ebe a, m na-ekwu banyere otú nyefee ndị a iTunes kedi songs si flash mbanye na iTunes Library.
Pịa Download bọtịnụ n'okpuru na-TunesGo echichi ngwugwu na wụnye ya na kọmputa. Iche iche TunesGo (Windows) na TunesGo (Mac) na-ma dị ugbu a. Na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị.
Jikọọ flash mbanye
Jikọọ flash mbanye na music ị chọrọ mbubata na iTunes gị na kọmputa site inserting ya n'ime kọmputa gị USB n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Tọghata iTunes kedi music ka MP3 na TunesGo ọ dị mkpa.
Site n'aka ekpe nke isi window nke TunesGo, ị pụrụ ịhụ a 'Media' ihe. Pịa ya ikpughe 'Music' window. Na 'Music' window, họrọ 'Tinye nchekwa' ma ọ bụ 'Tinye File' site na ịpị triangle n'okpuru 'Tinye'. Na mgbe ahụ na-agagharị gị na kọmputa mbubata music si flash mbanye. N'oge usoro, a ozugbo ga-gbapụta, na-arịọ gị iji tọghata songs gị Apple ngwaọrụ akwado usoro. Pịa 'Ee' aka akakabarede.
Nyefee akwado music na converted music ka iTunes n'ọbá akwụkwọ
Ugboro abụọ pịa iTunes icon ẹkedori ya wee họrọ "Mmasị" nke i nwere ike ịhụ na 'Dezie "menu.
Gaa na "Advanced Mmasị" site na ịpị "Advanced" abụọ nhọrọ na mkpa ka-enyocha on a nhọrọ, Nọgidenụ na iTunes Media nchekwa haziri. Detuo faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na n'ọbá akwụkwọ. Na iTunes menu, họrọ "File", mgbe ahụ, "Tinye faịlụ ka ọbá akwụkwọ" ma ọ bụ "Tinye nchekwa ọbá akwụkwọ" nke na-adabere ihe ị chọrọ. Agagharị gị na kọmputa na-ahụ gị na flash mbanye (ọ bụrụ na ọ bụ ebe ị na-zọpụta ndị songs na a tọghatara site TubesGo), ọ kwesịrị anya n'okpuru "My Computer". Họrọ songs ma ọ bụ na nchekwa na music mbubata ya ndị iTunes Library si flash mbanye. Alternatively, i nwere ike imeghe gị flash mbanye, họrọ songs ma ọ bụ nchekwa na converted music ị chọrọ mbubata, detuo ya, na iTunes, mgbe na music window, họrọ "Dezie" mgbe ahụ "mado". Usoro ekwesịghị ewe oge ezie na ọ ga-adabere na ọnụ ọgụgụ nke songs na ị na-importing, ihe, na ogologo ọ pụrụ ime.
Alternatively, ị nwere ike nyefee music guzozie si TunesGo ka iTunes mgbe converting site na-ahọpụta music faịlụ mgbe converting ma pịa 'Mbupụ na iTunes Library' si 'Export' wedaa ndepụta.
Ẹkeme Back Up iTunes ka iCloud
iTunes Oti mkpu na Elekere - Ka iTunes Tetanụ Ị Up
Free iTunes Lyrics ngwa mgbakwunye - GimmeSomeTune
> Resource> iTunes> Atụmatụ maka Nyefee Music si Flash Drive ka iTunes